Xa iNkosana yaseSaudi Crown kunye ne-PM yeNkulumbuso bethetha kunokuba yinto ebalulekileyo kwishishini le-UNWTO
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Xa iNkosana yaseSaudi Crown kunye ne-PM yeNkulumbuso bethetha kunokuba yinto ebalulekileyo kwishishini le-UNWTO
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Iindaba zeManyano • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Iindaba zaseSaudi Arabia zokuPhula • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Indima kaSaudi kuKhenketho lweHlabathi, kunye ne-UNWTO Headquarter ukusuka eSpain ukuya eSaudi Arabia kusenokwenzeka ukuba yayiphezulu kwi-ajenda kwifowuni namhlanje. Umnxeba phakathi kweNkosana yaseSaudi iNkosana uMohammed bin Salman kunye ne-Nkulumbuso yase-Spain u-Pedro Sánchez namhlanje uvula indawo yokuqikelela ikamva lokhenketho lwehlabathi.
Njengoko kuchaziwe kwinqaku elifanayo ngu Arab News kwaye i IGazethi yaseSaudi namhlanje, iNkosana uCrown uMohammed bin Salman waseSaudi Arabia uthethe nenkulumbuso yaseSpain uPedro Sánchez ngoMvulo.
Baxoxe ngobudlelwane phakathi kweSaudi Arabia neSpain kunye neendlela zokuphucula.
Iingcali zilindele ukuba esinye sezizathu eziphambili zale ngxoxo ikwinqanaba eliphezulu yayisisicwangciso seSaudi Arabia sokucebisa ngokufuduswa kombutho wezoKhenketho weHlabathi usiya eRIyadh.
Ukuhambisa i-UNWTO HQ ukusuka eSpain ukuya eSaudi Arabia akukabikho kwi-ajenda ye-UNWTO General Assembly ecwangciselwe u-Novemba eMorocco.
Uninzi lwamazwe angamalungu e-UNWO kuya kufuneka avote kwisindululo esinjalo.
Ngaba eli nyathelo limisiwe okanye laqaliswa namhlanje, xa iNkosana yaseSaudi Arabia INkosana u-Mohammed bin Salman wathetha ne-Nkulumbuso yase-Spain u-Pedro Sánchez kumnxaba?
Kuyaziwa ukuba imiba ephambili yokhenketho ayisoloko igqitywa ngabaphathiswa bezokhenketho, kodwa ziintloko zeLizwe okanye kwinqanaba likamongameli.
ISpain lilungu elisisigxina leLungu I-UNWTO. Ukuba ukufudukela kubukumkani base-Saudi Arabia kuya kuba yinyani, iSaudi Arabia iya kuba lilungu elisisigxina. Eli iya kuba lelinye inyathelo elibalulekileyo lokulawula kwilizwe lezokhenketho.
Ezokhenketho lushishino olubalulekileyo eSpain naseSaudi Arabia, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, iSaudi Arabia ibisiza kuhlangula eli candelo lehlabathi ngexesha lobhubhane wehlabathi kunye neebhiliyoni ezityaliwe zaza zabiwa.
ISaudi Arabia sele ingumbindi weziko le-UNWTO yengingqi, kunye neziko lommandla weWTTC.
Amalungu e-UNWTO ngamazwe amelwe ngabaphathiswa bezokhenketho. Amalungu e-WTTC azisa elona shishini likhulu labucala labachaphazelekayo kwezokhenketho kunye.
I-UNWTO inohlahlo-lwabiwo mali oluncinci. Ukukhokela ishishini lokuhamba nokhenketho kwihlabathi liphela kule ngxaki ikhoyo kufuna uhlahlo-lwabiwo mali olukhulu kakhulu. Ikwafuna indlela yobunkokeli obungcono kwindawo ye-UNWTO.
Into ebinokubonwa nje kwiminyaka embalwa edlulileyo njengengenakwenzeka, ngoku inokuba yinyani. Amazwe axhomekeke kwezokhenketho aye afune ukuphelelwa lithemba. Baye banqwenela imali kunye nobunkokeli. ISaudi Arabia inokubonelela ngazo zombini.
Naphi na apho uMphathiswa wezoKhenketho wase-Saudi Arabia u-Ahmed Al-Khatee abonakala khona, ungowokuqala we-VIP. Umhlaba ubiza i-911 kwaye i-Saudi Arabia ibiphendula ngokungaguquguqukiyo kuyo yonke le ngxaki. Umphathiswa wase-Saudi Arabia uzimase yonke inkomfa ye-UNWTO yengingqi ukuza kuthi ga ngoku.
Okufanayo akunakuthethwa ngeSpain. Kuphela kuxa iSpain yafumanisa isisongelo sokwenyani sokuphulukana neNdlunkulu ye-UNWTO, iSpain yavela kwikomishini yengingqi ye-Afrika e-Cabo Verde. I-Afrika inamazwe angama-54 azimeleyo, uninzi lwawo luvota njengamalungu e-UNWTO.
eTurboNews uqalile ukunika ingxelo ngezicwangciso zokuhambisa i-UNWTO ngoJulayi. Kule nqaku, i-eTN yatyhola ukuba ikomkhulu le-UNWTO lisuka eMadrid laya eRiyadh liza kutywina i-United States yoKhenketho.
ISpain kunye namazwe amaninzi e-EU akonwabanga malunga ne-Saudi Arabia ethatha indima ebonakalayo kwilizwe lezokhenketho. Beza nantoni na apham amalungelo oluntu ukuya kuSeptemba 11, xa usenza ngokuchasene nentshukumo yoBukumkani baseSaudi ngozakuzo.
Iindlela ezinje zozakuzo kodwa zidlalwe kumacala omabini. ISaudi Arabia isebenze kwihlabathi liphela nasemva kwendawo ukuze iphembelele izicwangciso zayo.
Umnxeba wanamhlanje usenokuba phakathi kwe-Nkulumbuso yase-Spain kunye ne-Saudi Crown Prince isenokuba ngumkhenkce.
Indlela iSpain ne-Saudi Arabia ezinokuphucula ngayo intsebenziswano kunye nobudlelwane kunokucingelwa ngalo mzuzu nje.
NgoSeptemba 20, 2021 kwi-13: 18
Oku akuyi kuba yimpazamo kuphela kodwa kuyothusa. Ayisiyiyo le nto kuphela eya kuba ngamampunge, kodwa ingabi namveliso.
Kungcono ube wedwa kunokuba ube nenkampani embi.
Andikwazi nokucinga ngokuya kweli lizwe malunga nentlanganiso, ngelixa ndisoyika abantu abaza kusebenza apho.
Ingaba nokuba bangandibhatala i-1 yezigidi zeerandi ngenyanga, ndingacinga ukuya evekini.